I-Eagle Feather Tipi e-Mojave eduze kwase-Las Vegas - I-Airbnb
I-Eagle Feather Tipi e-Mojave eduze kwase-Las Vegas
Sandy Valley, Nevada, i-United States
I-tipi ibungazwe ngu-Rob
U-Rob Ungumbungazi ovelele
Thatha isikhathi sokuxhuma nemvelo, ulalele ama-coyotes, ubheke izinkanyezi futhi uvumele ukuthintwa umlingo nokuthula kwasogwadule. Itholakala kuphela amaminithi angu-45 ukusuka e-Las Vegas epulazini le-dude elisebenzayo. Jabulela imisebenzi ehlinzekwa njengokugibela amahhashi, ukushayela izinkomo, imidlalo yama-rodeo kanye ne-cowboy noma ujabulele isikhathi esithile sokuthula uvakashela zonke izilwane. Ingxenye yenzuzo yethu iya kuyo
I-Native Wellness Institute ukukhuthaza inhlalakahle yaboMdabu ngezinhlelo nokuqeqeshwa.
Jabulela ishawa yangaphandle enamanzi ashisayo nokubukwa okumangalisayo. Kukhona isitofu sokukhempa, amabhodwe, amapani nezitsha zokupheka kancane. Ikhofi netiye kuhlinzekwa. Ukuhamba ibangana nje ukuya endlini engaphandle enendlu yangasese eshaywayo.
Ukuze uthole ukunethezeka, ehlobo sikunikeza indawo epholile yexhaphozi e-tipi kanye nesiphephetha-moya esinenkungu edekhini futhi ebusika siba ne-heater futhi umatilasi uyafudumala.
Siyazivumela izilwane ezifuywayo kodwa sizikhokhisa imali engu-$10 yezilwane ezifuywayo. ngobusuku. Siyakucela ukuthi ungashiyi isilwane sakho esifuywayo singanakiwe uma usuka endaweni. Ngokuziqhenya sinikela ngengxenye yezindleko zezilwane ezifuywayo kwa-SPCA.
4.91 · 371 okushiwo abanye
Jabulela ipulazi lamahektha ayi-160 elinamahhashi, izimbuzi, izinkomo, i-pig newton, izinja nezinkukhu. Ihora nesigamu usuka lapho kukhona iTecopa Hot Springs kanye nesango eliya eDeath Valley. I-Saloon endala kakhulu e-Nevada in 20 min away. I-Pioneer Saloon edolobheni eliyizipoki laseGood Springs. I-Las Vegas iqhele ngamaminithi angu-45. Kunemakethe encane eSandy Valley kodwa sincoma ukuthi uphathe ukudla futhi ugcwalise ithangi lakho likaphethiloli njengoba igalaji likaphethiloli eliseduze liqhele ngamaminithi angu-30.
I-tipi inomnyango wayo. Uzoba nobumfihlo obuningi. Uma ufisa ukuhambahamba epulazini wamukelekile. Sikucela nje ukuthi usayine ukuyekelela ngaphambili. Ukuyekwa kuzoba seTipi. Sisepulazini njalo ngakho sithemba ukuthi sizoba nethuba lokuhlangana nawe. Kodwa-ke, asishayeli ucingo kuphela futhi kuhlale kukhona othile epulazini uma udinga.
I-tipi inomnyango wayo. Uzoba nobumfihlo obuningi. Uma ufisa ukuhambahamba epulazini wamukelekile. Sikucela nje ukuthi usayine ukuyekelela ngaphambili. Ukuyekwa kuzoba seTipi. Sise…
Hlola ezinye izinketho ezise- Sandy Valley namaphethelo